Fianarantsoa: Fifidianana filohan’ny Ligin’ny baolina kitra tsy azo antoka
lundi, 04 décembre 2017 10:16
Kandida tokana irery ihany eto Matsiatra Ambony no nankatoavin’ny komity mandrindra ny fifidianana avy ao amin’ny Federasionan’ny baolina kitra. Telo no isan’ireo nametraka antontan-taratasy ka io kandida io no hany tokana hofidiana araky ny lisitra voalazan’ny fanapahana n°09- FMF- CEN 2017.
Mitsipaka izany marindrano ny mpakafy baolina kitra maro eto Fianarantsoa, indrindra ny filohan’ny section miisa 6 eto amin’ny faritra, noho ny tsy fanajana ny fitsipika andininy faha-12 eo anivon’ny federasiona. Voadingana hoy izy ireo ny fepetra fototra izay milaza fa in-telo ihany no afaka mitondra ny ligy ny kandida iray, ka tsy tokony ho ekena intsony ny filatsahan-ko fidian’ity filohan’ny ligy mbola mikasa hitondra mandritra ny fe-potoana manaraka ity.
Nomena telo andro nanomboka ny 30 novambra lasa teo ny kandida roa hafa mba hamenoana ny antontan-taratasin’izy ireo sy ny fanamarinana samihafa ao anatin’izany. Raha ho an’ny kandida vehivavy iray, izay nilatsaka ho fidiana dia nohamarinin’ireo mpanohana azy fa mpitantam-bolan’ny FC Zanakala ny tenany ary nandatsa-bato nandritra ny fifidianana filohan’ny section farany teo.
Miandry ny fampiharana ny rariny sy hitsiny izy ireo arak’izany ary hametraka fanoherana hentitra mandritra ny fifidianana filohan’ny ligy raha toa ka tsy mandeha amin’ny laoniny ny fizotr’izany.
mercredi, 13 décembre 2017 00:05
mardi, 12 décembre 2017 14:21
mardi, 12 décembre 2017 04:54
mardi, 12 décembre 2017 01:10
lundi, 11 décembre 2017 02:20
dimanche, 10 décembre 2017 20:00
dimanche, 10 décembre 2017 14:24
samedi, 09 décembre 2017 22:38
lowest price viagra 100mg tadalafil 20mg best price buy cialis without prescription viagra from canada pharmacy rx one review india pharmacy viagra Canadian Online Pharmacy Without Prescription buy cialis without prescription healthyman maxifort zimax 100mg